11 arimood oo ah furaha horumarka. WQ: Saynab Daahir | Gacanlibaaxnews
11 arimood oo ah furaha horumarka. WQ: Saynab Daahir
February 10, 2017 - Written by C M
Waxa jira 11 arimood oo ah furaha horumarka sida in aad noqoto taajir. Arimahan ayaa lagu soo bandhigay daraasad ay samaysay aqoonyahanad u dhalatay wadanka Sweden oo soo saartay buug ay ugu magac dartay Passion.
Hadaba waa kuwan 11 qodob oo ay daryeelmagazine.com idiin soo turjuntay:
1- Dareenka: Qofka oo leh karti uu ku arko meesha iyo arinta ay ku jirto fursad uu horumar ku gaadhayo, kadibna isku daya in uu u raadiyo waxii u suurta galin lahaa si uu
arintaa uga midho dhalin lahaa.
2- Dhiiranaan: In aanu qofku ka baqan in uu qasaare galayo in kale.
3- Horumarka jecel: Qofku in uu yahay mid jecel in uu mar walba wax barto.
4- xiisayn iyo karti badan: Qofka oo muujinaya xiisaha uu u qabo in uu horumar gaadho, noqdana mid aad u karti badan taas oo looga jeedo madaale ah.
5- Kalsoonida iyo naftaada: In uu qofku naftiisa si fiican u yaqaan, iskuna kalsoon yahay.
6- In uu yahay qof degan, dareen wanaagsana u leh dad la dhaqanka.
7- Jidka: Qofla oo leh karti uu ku kala dooranayo jidka uu u marayo horumarkiisa. Wax jirta in uu qofku mararka qaar uu ku qasban yahay in uu kala doorto laba jid. Sida asaga oo kala doorta in uu waqtigiisa uga faa’iidaysto in uu wax barto ama in uu waqtigiisa ku dhamsyto fadhi ku dirir iyo sheeko aan macno lahayn.
8- Karisma: Qofka oo leh haybad uu ku soo jiidan karo dadka.
9- Tartan: Qofka in uu yahay mid shaqada uu ku jira u arko sidii tartan oo kale. Qof jecel in uu la tartamo dadka kale.
10- Meel wanaagsan, dad horumar gaadhay, xidhiidh: In uu qofku joogo meel ay ka jirto wax isu sheegid iyo is tusida horumarka, in uu qofku ku daydo dadka horumarka gaadhay sida Bil Gate iyo xidhiidh uu qofku la leeyhay dad badan oo shaqooyin yahysta kuwaas oo kuwa kale sii bara qofka.
11- Dareen xoogan iyo jacayl: In uu qofku leeyahay dareen xoogan oo uu u qabo hourmarka, jecelna horumarka.
Gacanlibaaxnews masuul ka ma aha habka iyo curinta qoraalkan ee waa fikir iyo aragti u gaar ah qoraha. Waxa se Gacanlibaaxnews masuuliyadi ka saran tahay hubinta iyo kala haadinta ka qoraallada ka hor inta aanaan idiin soo baahin.
Qalin Ma koobaan: Gabay Soo Bandhigaya Magacyada Dhirta Oo Uu Tiriyey Abwaankii Cali Mooge Geeddi. Qalin ma-koobaan waa buugga lagu soo ururiyay suugaanta hodanka ah ee Alle ha u naxariistee Abwaan C...
Madfacii I Sigay! – Cabdiwahaab Xasan Dhafe. Waxa dalka ku hooreeysa daruurtii colaadda. Qasaaraha ay geysanayso meel walba ayaad kula kulmaysaa....
Maxaa loo dhaariyay weriyeyaasha? WQ: Khaalid Foodhaadhi Dooddii 19-10-2017 dhex martay musharraxiinta saddex xisbi qaran ee Somaliland ee u tartamaya mada...
Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta “, ee uu qorey Cabdinaasir Axmed Ibraahim Khaalid Jaamac Qodax Qodax02@gmail.com Buuggan magaciisu dusha ku xusan yahay baa ka mid ahaa dhawr buug oo hadiyad ahaan magaala...
Tixda Miski: Xasan Ganey Nolosha Dhabta ah buu Doortay – WQ: Rashiid Sh. Cabdillaahi (Gadhweyn) Waxa aan u malaynayaa su’aasha muranka leh ee ugu horrayn, ku soo dhacaysa dersaha tixda Miski e...
Markuu Hoggaanku Asqoobo, Bulshaduna Way Wajaqdaa. Qore: Cabdiraxmaan Cadami Muddo sideetan sannadood ah Somaliland waxa xukumayay boqortooyadii Ingiriiska. Horumarka dalka iyo ...
Copyright © 2018 gacanlibaaxnews ®All rights reserved.